Ny ankamaroan'ny toetran'i Cancun dia midadasika ny ranomasina sy ny masoandro, fa raha mankany Cancun ianao mandritra ny vanim-potoana (hatramin'ny volana jona ka hatramin'ny novambra), dia azo inoana fa ny orana dia hampiseho ny orana sasany amin'ny dianao. Aza manahy be loatra: raha tsy misy rivo - doza na tafio-drivotra mahery , dia mety ho orana mandritra ny fotoana fohy ary ho afaka hiverina haka aina amin'ny masoandro ianao ao anatin'ny fotoana fohy. Fa ho an'ireo andro izay fa ny orana ary tsy fantatrao izay tokony hatao amin'ny tenanao, dia misy zavatra sasany azonao ankafizina any Cancun na mamiratra.
Tsidiho ny tranombakoka Maya
Ny tranombakoka Maya any Cancun. © Suzanne Barbezat
Ao amin'ny faritra manodidina ny hotely Cancun, hahita tranom-bakoka maoderina ianao, izay hahavita ny fianarana rehetra momba ny sivilizasiona Maya izay nahatonga ity faritra ity. Ny tranom-bakoka dia manamarika ny zavakanto Maya izay hita manerana an'i Quintana Roo miaraka amin'ny fampiratiana fanentanana. Amin'ny fitsangatsanganana ireo voatahiry sy ny harenan'ny fampahalalam-baovao, fitsangatsanganana ny tranomboky dia ny fotoana mahafinaritra amin'ny andron'ny orana. Raha misintona kely ny lanitra, afaka mivoaka ny trano ianao ary mahita ny tranokalan'ny archaological site San Miguelito, toerana kely iray Maya hita ao amin'ny tranom-bakoka.
Ny hainandro ratsy dia tsy manakana ny fikarohana ambanin'ny tany. Azonao atao ny mianatra momba ny geology sy ny tantaran'ny zana- tany ao Yucatan amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny onja sy renirano ambanin'ny tany ao Río Secreto . Ity dia fitsangatsanganana tokana, karazana fitsangatsanganana mitaingina ahafahanao mandeha, mandevona ary milomano eny an-dàlambe izay mamakivaky ireo rafitra voajanahary vatosoa sy ireo lava-bato miafina. Io fitehirizana voajanahary io dia hita atsimon'i Cancun, akaikin'i Playa del Carmen.
Mitadiava fitsaboana spa
Raha tsy afaka mipaka amin'ny masoandro ianao, dia tsy maintsy hahita fomba hafa hialana voly. Soa ihany, manana toeram-pialan-tsasatra maro i Cancun izay ahafahanao misoritra ao anatin'ny tontolo feno fahasalamana tanteraka. Ny sasany amin'ireo toeram-pitsaboana dia manolotra fitsaboana izay mifototra amin'ny fitsaboana Mayan nentim-paharazana. Afaka manao temazcal ianao , mahazo hosodoko amin'ny sôkôlà, akanjo na endrika, na inona na inona fitsaboana tianao indrindra.
Raha te hividy fahatsiarovana sasao ianao na fanomezana iray na roa ho an'ny namanao any an-trano, dia tsy ho diso fanantenana amin'ireo safidy hividy any Cancún ianao. Misy toeram-pamokarana avo lenta toy ny Luxury Avenue miaraka amin'ny trano fidiovana farany izay mitondra anarana fanta-daza mpamorona toy ny Burberry, Cartier, Coach, ary Fendi. Fa raha mitady zavatra Meksikanina misimisy kokoa kokoa ianao, dia tsidiho any amin'ny tsenakely nentim-paharazana ao Cancun, izay ahafahanao mitsambikina fahatsiarovana sasantsasany na misakafo rehefa miandry ny lanitra feno volom-bava.
Raiso ny kilasinina
Raha tokony halefa ny orana ianao, dia afaka manararaotra ny fotoana hianarana ny fomba hanomanana ny sasany amin'ireo sakafo Meksikanao tena tianao. Ny fahaiza-miomana amin'ny fanatanjahan-tena dia efa tonga lafatra foana, ary ankoatra ny fianarana, dia hanana fahafinaretana ihany koa ianao ary handraisana sakafo matsiro tsara. Misy safidy vitsivitsy ho an'ny kilasy fandrahoan-tsakafo any Cancun: afaka mametraka kilasy mahandro ao amin'ny Centre Culinary Ritz Carlton ianao na hokaramain'ny Chef Claudia ao Can Cook any Cancun.
Tequila angamba ny mozika malaza indrindra any Meksika, ary ny teny dia mivoaka fa tsy natao fotsiny ny nanao andian-jatony ary mamo haingana. Mba hahazoana fankasitrahana marina momba ny tequila tsara, tsara ny manavaka ireo olona samihafa ary mianatra momba ny fomba nanaovana azy. Ny trano fandraisam-bahiny La Destileria ao amin'ny faritra hotel Cancun dia manana karazany 100 mahery ao tequila , ary manam-pahaizana tequila izay hanazava ny fahasamihafan'ny tsara aminao, ary koa ny fametrahana ny teboka faran'izay manan-danja: tequila tsara dia natao sedraina. Ary tsy azontsika eritreretina ny fomba tsara kokoa handaniana orana mandritra ny orana toy ny fanakanana tequila tsara.
Mety ho ratsy be amin'ny toetr'andro angamba ianao, fa angamba i Lady Luck miandry anao amin'ny iray amin'ireo casino ao Cancun. Nosokafan'ny Grand Oasis Cancun ny trano fisakafoanana voalohany tany amin'ny faran'ny volana aprily 2017; Ao amin'ny Red Casino ianao dia afaka manandrana ny tananao amin'ny lalao black jack, roulette ary poker, na mitsapa ny vintanao amin'ny karazana milina fanala. Raha misy lalao goavana izay tsy tianao ny tsy hitanao dia azonao atrehina amin'ny iray amin'ny fahitalavitra lehibe. Misy ihany koa ny casinos misy eo an-toerana, anisan'izany ny Casino Palace Dubai, ary Casino Palace, samy any afovoan-tanàna Cancun, na casino Playboy any amin'ny faritra hotely. Raha mandeha ianao, tandremo sao maka pesos Meksikana sy karatra ID ianao, manapaha hevitra mialoha hoe ohatrinona ianao handany, ary mitandrema vola ampy ho an'ny taxi hiverina any amin'ny hotely.
Ahoana no hialana voly any Cancun, Meksika
Adventure Travel 101: Ahoana ny maha-mpitsidika mpanaramaso
Mankalaza an'i Charles 2017 (Waldorf, MD faha 4 Jolay Fireworks)
Aiza no hipetrahan'ny Parkch Stadium ao Downtown St. Louis
Chesapeake Bay Bridge 10K Race (Novambra 2017)
Ny 9 Best Boutique Hotels tao Toronto tamin'ny taona 2018
Fitaovana volkano volkano
Krismasy 2017 ao Colonial Williamsburg
Ahoana no ahatongavana any amin'ny Nosy Fire avy any New York?
Mayan Riviera Hevitra sy Resorts
Torolalana ho an'ny Colleges & Universities Manhattan
Free or Cheap Museum Night any San Francisco